Izixhobo zoLungiso lweKhaya kunye nokuSebenza
Ngexesha elinzima lexesha le-COVID-19, yintoni esinokuyenza ukuzikhusela thina kunye nabantu esibathandayo? Ngaphandle kokunxiba imaski yobuso xa uphuma kwaye uhlamba izandla rhoqo, yenza umthambo ngakumbi kwaye ukonyuse amajoni ethu omzimba iya kuba lolunye ukhetho olufanelekileyo. Nangona kunjalo, abantu banendawo encinci kunye nokuxhotyiswa komzimba ...
Ukulwa ubhubhane weSoftware Key PVC
ngomphathi ku 21-02-15
Isitshixo se-PVC esincinci yenye yezona zinto zithandwayo zokunikezela ukukhuthaza ishishini lakho, umbutho okanye umcimbi. Unokuzibuza ukuba isantya esincinci esincinci sePVC siyisasaza njani intengiso, xa abantu bebeka kwisipaji sabo, isipaji, izitshixo, iimoto, iibhegi, iselfowuni, konke kuyenza ...
Iindidi ezahlukeneyo zezixhobo zemaski, ezikhuselekileyo kwaye zikhululekile ukunxiba
Iimaski zobuso zikhawuleze zaba yimfuneko yemihla ngemihla kwi-2020, kwaye i-COVID-19 inombulelo omkhulu ngokufunyanwa kwabo okutsha. Ukuba imaski yiRegina Georges yokunxiba yonke imihla, izixhobo zemaski kungekudala ziya kuba yiGretchen Wienerses kunye noKaren Smiths weCoronavirus Preventio ...
Isiko leMask yobuso kwiXabiso elisezantsi
ngomphathi ku 20-10-28
Iimaski zobuso ngoku ziyinxalenye yobomi bethu bemihla ngemihla, ufuna ukuzikhusela kunye nabantu obathandayo kwaye wenze iimaski zobuso zesiko ukwenza ingxelo yefashoni, uguqule usuku lwakho lwesitayile nanamhlanje? Ndiyavuya ukuthi uza kumthengisi olungileyo okwaziyo ukuyila imaski yobuso bakho ...
Ukusebenza kweBhokisi engenantambo yokuBiza ngeGciwane kunye neLampu yokuBulala i-UV
Ngaba ukhe wakhathazwa ngendlela yokugcina ucocekile kwaye usempilweni, ngakumbi kwi-COVID -19? Izinto zethu ezintsha zinokunceda ukusombulula iiphazili zakho. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zezinto zokulwa ne-coronavirus. Siza kubonelela ngemisebenzi emininzi engenantambo yokutshaja / ibhokisi yokubulala iintsholongwane kunye ne-UV disinfectio ...
Ubuso beMask Lanyards kunye neentsimbi zeziSixhobo oziFunayo
Ukunxiba imaski yobuso obukhuselayo ngoku kuluhlu lwezinto eziyimfuneko mihla le kubomi bethu iinyanga okanye iminyaka ezayo, oko kukuthi, ukuhlamba nokugcina iimaski zomntu wonke zahlukile kunokuba ngumsebenzi, kwaye akukho mntu ufuna ukuphulukana neemaski zobuso kuba wayilahla apha endleleni. Siyavuya uku ...
Iphepha le-Acrylic lokuHanjiswa kweNtlalo
ngomphathi ku 20-10-08
Ngaba unokhuselo olwaneleyo ukugcina abafundi bakho, abasebenzi kunye nabathengi bekhuselekile? I-COVID-19 iyitshintshile indlela elijongeka ngayo ilizwe lethu. Ingcali ngezifo ezosulelayo icebisa abantu ukuba bangathethi omnye nomnye xa kufuneka betyile kunye. Amashishini anethemba lokuseta izahlulelo ziya kunciphisa ...
Ubhubhane oqhubayo wenze abacoci, abacoci kunye nabacoci kubalulekile kuba abathengi bazama konke okusemandleni abo ukuhamba ngendlela yesiqhelo kwaye bahlala bekhuselekile, ke umnini sanitizer wenzelwe ukunceda ukuyenza kwangoko ukuba ihlale isesandleni. Ukugcina izandla zicocekile kubaluleke ngakumbi kunangaphambili, ngelishwa, ...
Umsebenzi oSebenzayo we-Metal Opener Keychain
Siyavuya ukwazisa ngeyona mveliso yethu ithengiswa kakhulu: I-keychain yesinyithi esetyenziselwa izinto ezininzi enokuqhutywa yonke imihla kwaye ikhusele impilo yethu. Le ayisiyokuvula umnyango wokuchukumisa kuphela, ngokulula ukucofa amaqhosha e-ilifti, tsala izibambo zedrowa kunye neenqwanqwa zeminyango, ucango oluvulekileyo ngaphandle kokubambelela komzimba ...
Isandla seSanitizer Silicone Isongo
ngomphathi ku 20-09-11
I-sanitizer yesandla sisixhobo esibalulekileyo sokucoceka ngelixa ubhubhane usomelele kwaye ugcwele. Kufuneka siyiqwalasele yonke into esiyiqhelileyo malunga nendlela yokukhusela ukhuseleko kunye nempilo yethu, njengokuhlamba izandla rhoqo, ucoceko olululo kunye nococeko lwezandla, oluyinyani ngokukodwa kubantu ...
Sinikezela ngeMveliso zokuThintela ukosuleleka
ngomphathi ku 20-07-17
Izipho ze-SJJ aziboneleli kuphela ngemaski yobuso kunye nomgcini wemaski, ibandana, isicoci sesandla, iphepha lesepha, kodwa ikwabonelela nangezinye iintlobo ezahlukeneyo zeemveliso zokuthintela usulelo. Nokuba ukhangela iibhendi zokunganyangeki kwe-silicone, iibhola zeyoga, imati yeyoga, umtya wesilevu wokulwa nokurhola ukukunceda ufumane ...
IMaski Yelaphu KWI-PRICE YOKUJONGA IXABISO
ngomphathi ku 20-07-07
Ngenxa yesigqubuthelo sobuso sokuhlinzwa sinqongophele, nayiphi na imaski ibhetele kunokuba kungabikho maski ukunceda ukucothisa ukusasazeka kwe-coronavirus, kwaye ukhethe iimaski zobuso zelaphu kunokuba sisisombululo esikhulu. Izipho eziMhle eziMenyezelayo zibonelela ngesigqumathelo sobuso belaphu kumatshini wexabiso ngokuthe ngqo kunye nexesha lokuhambisa ngokukhawuleza, ngeendlela ezahlukeneyo ...